The Irrawaddy's Blog: ဆရာ့ဆရာမကြီးရဲ့ မဟာလက်ချာ
မြန်မာပြည်က အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်တချို့ ၀တ်စားပုံတွေဟာ ပြည့်တန်ဆာဖက်ရှင်တွေပဲ ဆိုပြီး သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ပြောဆိုနေတဲ့ အမျိုးသမီး ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ မသိပါ။
ပြည်ပရောက်နေသူတဦးလို့ ယူဆရပါတယ်။ယူကျူ့  ပိတ်သွားသော အမတစ်ယောက်ရဲ့  ယူကျူ့ ကတော့ ကြည့်လို့ မရအောင် ပိတ်ထားတာကိုတွေ့ ရှိရပါတယ်... ဆွေးနွေးထားသူ က ပြန်လည်ဖွင့် စေချင်သေ ယူကျူ့လေး ကတော့ ဒီလင့်လေးဘဲဖြစ်ပါတယ်... ယခုတော့ ပိတ်ထားတာကို တွေ့ ရပါတယ်.... www.youtube.com/watch?v=GR_hrVSEDzo
Posted in: ဗီဒီယို , အမြင်
ကိုကိုလန် said... :
မဆိုးပါဘူး။ အဆင့်တန်း ရှိရှိ ဖော်တာ ကို ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ သိလဲ သိချင်တယ်၊ ကြည့်လဲ ကြည့်ချင် တယ်။ မျှော်နေ မယ် နော်၊ ဟဲဟဲ
ကောင်းတယ်၊ အဲလို မြန်မာစိတ် အပြည့်ရှိတဲ့ အမျိူးသမီးကို အားပေးတယ်။ သူပြောတာ မှန်တယ်။
I amabit rough like you are, so here is what I like to say.
You sound stupid. Myanmar is going throughaperiod of transition towards more open society with all channels of media widely available to young people now. Asaresult it is unavoidable that the way people dress will change and in 10 years you will see all the women in Myanmar cities wearing trousers and skirts like in Thailand, Japan, Korea, China and more. Girls will wear miniskirts. Is itaproblem? Does it lack the standards which are set by YOU? If they over-dressed (in your term over-exposed!) it does not matter. These are perceived fashion in their mind and they will come and go like any other fashion. So, chill it! If you see them wearing like prostitutes then I also see you likeaprostitute because you do not wear Myanmar traditional dress. The only good thing about you is that you haveagut to say in public what you think. I admire you for this but not what you said. It is just stupid!
very frank and outspoken comments.Looking forward to see more comments on myanmar
" I know where her words come from ' said... :
some are right .
in U S A - Woodstock
Australia - Mardi Gras
I don't want to say more. Just think over it.
Human psychological exit .
Such things are present since BSPP era.
One caption in " yay Pet Khan Htwet Car ' said.
' JaPu LaOot Htu Htu ' . can u understand in Myanmar.
I remember this caption.
When she said ' Phar Tae neth Thu ' means. . the quality of clothes and features and presentation I understand
Voyeurism is the word to explain in this phenomenon.
I will not explain in details of that in this area.
Voyeurism does not only mean ' to watch sexual activity by peepholes; to watch sexual activity with others; it is more than that .
ThinGyan is one of this opportunity. Woodstock is one of them. Mardi Gras is one of them.
People like to be watched, to be commented about this ( Wai Phan Khan Chin Tae ) . That is the essence. that is one of the ' voyeurism ' .
Humans being enjoyed it. It has been there for long , but not as explicitly as in B S P P . By saying so don't give credit to last B S P P people.
Well. .....welll.. it isawide subject . I like to say more. But I rather leave this in details by much more experienced psychiatrist and sexpert to explained in civilized and educating ways.
To summarize, what this lady stated is ' some acceptable. ' but not all. In other words, all active young reproductive aged women / men like to enjoy the ' such lusty life' .
There is no way or no guarantee to ' follow her life style ' like wearing HtaMein in monastery and when monks visited her place. She was expressing about herself.
Do not overemphasize about this issue. The government and environment will control by itself.
Prostitution is common not only in this era, it has been there foralong long time.
All people need it ' good economy ' - even ' sexual trading and sexual business' will be still there . But not asa' National Economy Business '
NOT AS ' NATIONAL ECONOMY BUSINESS'.
don't take this ' everyone can upload any video in these day' video as ' Yay Kyee Khoon Kyell'
no derogatory remark for this lady.
Compliment to this lady. But don't overemphasize with this.
စကားလုံး တချိူ့ အသုံးအနှုံးကြမ်းတာ မှန်ပေမဲ့ သူပြောတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ ( ဖေါ်ချင်တာကို မတားပါ၊ ဖေါ်တဲ့ စင်မြင့် "နေရာ" မှားနေတာ) ဆိုတဲ့ အချက် ကို လက်ခံပါတယ်...
သတင်းရေးတဲ့သူက အဖေါ်အချွတ်လေးတွေကို ကြိုက်ပုံပဲ။
ကိုယ်အိမ်က မိန်းကလေတွေကိုကိုယ် ဖော်ဖို့ချွတ်ဖို့အားပေးပြီး ထိုင်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။
လူမျိုးနဲ့နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု့ကိုတော့ အရောင်မဆိုးပါနဲ့။
Totally agree with you, Ma. They don't understand how to wear the dress "du nay yar du taw nay yar taw so tar ma thi kya boo". It's true that girls in western countries expose but not everywhere like them. Myanmar girls like to copy but not to consider. They are so proud of themselves to expose like that. The comment by “Anonymous” makes me surprised. It's sure that Myanmar is going throughaperiod of transition towards. I accept that they wear skirts, dress, shorts, miniskirts but you know it's not the same way because the way that most Myanmar girls wore is like the prostitutes. I think that person who gave the comment, never go to oversea. Myanmar girls don't copy how to be sharp, smart, and intelligent like the girls who live is abroad, they only compare the garment, the bag, the phone, the accessory etc. I'd like ask one question to «Anonymous” the one who gaveacomment, if his sister or his daughter wears like this, will he accept it? If so carry on man.
ငါတို့ဟာ သင်းကြန်ကျမှ မြန်မာဖြစ်မှာလား သင်းကြန်ကျမှ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရမတဲ့လား မြန်မာနိုင်ငံမှာမှ မြန်မာဖြစ်မှာလား မြန်မာနိုင်ငံမှာမှ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရမတဲ့လား ။
အရှက်တရားကို ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာ ဘယ်ဘဝမျိုးမှာမဆို ရှိကြဖို့ ကာကွယ်ကြဖို့ လိုတယ်။
အို ... အမိများ အကြီးကြီးတွေပြောနေမဲ့ အစား သေးသေးလေး တစ်ခုလောက် လုပ်ပြလိုက်ပါ။ ပြချင်တိုင်းမပြနဲ့ ငါပြသလိုပဲပြ ဆိုတာမျိုးကတော့ကွယ် ...
Agree with u! N she should talk to the Mirror! Bcoz she said " she wear SHORT n GO FOR DRINK"
ဥက်ကလာ သတငျးမြား said... :
အဲ့ မိန်းမကြီး က ဆုံးမတာထက် ကြွားချင်တာကများနေတယ် ။ ဆုံးမချင်ရင်လဲ အများလက်ခံနိုင်လောက်အောင်ပြောသင့်တယ်။ သူက မင်းသမီးတွေ ကို j ၀င်နေပုံလဲ ရတယ်။ ပြီးတော့ တော်ကီ မကောင်းဘူး ။ ပွင့်လင်းတယ်ဆိုတာ ထက် မိုင်ရိုင်းတာ က ပိုများတယ် ။ မင်းသမီးတွေထက်တောင် မိုက်ရိုင်းပုံ ရပါတယ် ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် သူ့အထုတ်ကိုသူ့ဖြီလိုက်တာပဲ ။ သူ့လုပ်ပုံက ပိုပြီးရှက်စရာ ကောင်းပါတယ် ။
ကောင်းလွန်းလို့ ဘဒူမှ မရှာကြဘာနဲ့ ၊ အမဖာသာသာ တင်ပေးဘာ
ဒီအမျိုးသမီးက စင်္ကာပူမှာနေသလိုလို သိရပါတယ်။ အမှန်တော့ မြန်မာပြည်က အမျိုးသမီးလေးတွေဟာ တစ်နှစ်မှာ ၃၆၀ ရက်လောက် မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်ပြီးနေကြတယ်။ အိနြေ္ဒရကြတယ်။ အဆင့်အတန်းရှိရှိ ကိုယ့်သိက္ခာ ကိုယ်ထိန်းပြီး နေကြတယ်။ တစ်နှစ်မှာတစ်ခါ သကြန်ကျတော့ ကဲချင်ကြတာပေါ့။ သီချင်းတွေလဲ ကဲတဲ့သီချင်းတွေနဲ့ နွေရာသီး နေပူခေါင်ကြီးထဲမှာ ရေပက်ခံပြီး ကဲတာ။ ဒီအမျိုးသမီးလို မျိုး နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့မိန်းခလေးတွေဆိုရင် နေချင်သလိုနေ သွားချင်သလိုသွား အိပ်ချင်သူနဲ့ အိပ်။ သောက်ချင်သလိုသောက်။ သူပဲပြောတယ်လေ အရက်သောက်သွားရင် အရမ်းတိုတယ်တဲ့။ ဆိုလိုတာက အဲဒီည ဖြစ်ချင်သလိုကို ဖြစ်သွားနိုင်တာ။ အဲ တစ်နှစ်မှာတစ်ခါ နှစ်ခါ ဘုရားကျောင်းကန်သွားတော့ မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်တယ်။ ဒါကိုကျတော့ ဂုဏ်ယူပြီး မြန်မာပြည်က အမျိုးသမီးလေးတွေကို ဝေဘန်တာ မရှက်ဘူးလားမသိဘူး။
toffee_apple said... :
First of all, thumb down to the writer of this article. The title itself sounds so mean and objective. Also, it is not true that she has closed her YouTube account and the link for her channel is still available here http://www.youtube.com/user/MissBurmese/videos. To the viewers of this article, before you draw any conclusion to this lady's harsh words, you should watch this link first http://www.youtube.com/user/MissBurmese/videos. Being criticized byavideo created by an anonymous juz for wearing like that onabeach .
naw naw said... :
well,wearing revealing clothes doesn't is not exclusive to prostitutes; not all prostitutes wear revealing clothes.likewise, not all women who wear revealing cloths are prostitutes. So i don't understand why you have to categorize all women who wear something that makes them feel sexier prostitutes? I'd say, if you have got it, why not flaunt it!
On Thingyan: cultures change.Get over it. Maybe in the past women covered it all up while particpating in thinggyan, but not any more. Those who wish to maintain traditional values of ThinGyan haveadifferent way of celebrating Thangyan than the mainstream public. But u have to understand the majority has embracedamodern version of Thingyan. and Thoose who go to "man dat" nowadays go there with the mindset of going to club and thus dress appropriately for suchaplace, which u said u have done the same. So why makingafuss??
Last, it's easy to say some "old rich" women can be wearing revealing and classy at the same time while the "new rich" just look like whores, can u elaborate more and give us an tips on how to get it right?
Please watch the above link first before you draw any conclusion to that lady. Her words may sound harsh but before that she was criticized by an anonymous with that video in the link just for the way she wore atabeach and comparing with what those gals wearing at Thingyan .
I have been asked to respond. I will not allow my sister or daughter to wear like this. In fact I will only allow my sister or daughter to wear Myanmar traditional dress even if they live in USA or UK or Japan or Thailand. Not wearing Myanmar dress is an insult to Myanmar culture and tradition. Do you wear skirt? If so, you are not in any position to criticize anyone? They have as much right as you have to wear what you think is right for you.
You are just showing off your stupidity. Not only clothes are important, the attitude and personality are important as well. Shame on you, asaBurmese girl saying such rude and stupid thing. The supporters: what is the value ofaBurmese girl? clothes? LMAO
ပထမတစ်ယောက် WYMYAT ဆိုလား မသိဘူး ကောင်မလေးပြောသွားတာ ယဉ်ကျေးမှုအတွက် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောသွားတာကို ကျွန်တော် အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်။
အခု ဒီအပေါ်က ကောင်မလေးပြောတာက စကားလုံးမှန်သော်ညားလည်း လမ်းဘေးက ငါးစိမ်းသည် ပြောသလို စကားလုံးတွေက အရမ်းကြမ်းတယ်။ ဖင်ခေါင်းကျယ်ချင်တယ်။ သူပြောတဲ့ အဆင့်အတန်းဆိုတာထက် သူဆီမှာ မိန်းမကောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းဆိုတာ မရှိဘူး။
May I Have Ur Attention PLZZ.Whatever I Wear or SHOW is HIGH CLASS n U wear or SHOW is LOWWWWWWWW CLASSSSSS, :P. When I drink is social n u drink is against the culture.So do as I say n don't do as I do, ok?
Bitchy Bitch said... :
April 25, 2012 11:11 PM Reply
အဲ့ မိန်းမကြီး က ဆုံးမတာထက် ကြွားချင်တာကများနေတယ် ။ ဆုံးမချင်ရင်လဲ
agree with ur remarks.
she said something about ' nouveauriche ' . but she actually could not pronounce and I wonder why she said such two words ( origin from French ) .
1. Khit Pyet TaHtay
2. Boe Bwar Khit htae ka ChanTar .
also, she can do whatever she likes. And ThinGyan is not contraindicated for such dress.
Likewise in Christmas, some went to Church and do religious things, some do what they want.
that is not her business. She just didastunt or someone from Irrawaddy / or / some media madeastunt and create this upload video.
Anyone can do such video and it is rubbish.
And she herself looks likea' working girl ' . The style of presentation and her face and etc.
ဖြစ်စေချင်တဲ့..စေတနာကို..ဒေါသနဲ့ ပြောမိသွားတာပါ...ဒါပေမယ့် တကယ်လဲ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နေတာအမှန်ပဲမှတ်လား..အဲလို့ ပြောတဲ့သူရှိမှလဲ မကောင်းဘူးဆိုတာ သိကြမှာပေါ့..သူပြောတာ၇ိုင်းပေမယ့်..အဲ့လို ရိုင်းတဲ့စကားကို ကိုယ်တိုင် မပြောဖူးဘူးဆိုတာ..အာမခံနိုင်ရဲ့ လား...
John said... :
ဒီလိုဆိုစောင့် ကြည့်ရအုန်းမှာပေါ့ ဗျာ.......ခင်ဗျားသမီးတွေ ကြ ဒီထက်တောင် ဆိုးမယ်နော်........ ကြမ်းကျွှံ၇င် နှုတ်လို့်ရတယ်...စကားကျွှံရင် နှုတ်လို့မရဘူးဆိုတာ ကိုလည်းမမေ့ ပါနဲ့ဗျာ....
အမ ဖြစ်နိုင်ရင် အဆင့်တန်းရှိရှိလေး ဖော်ပြပေးပါလား... မြင်ဖူးချင်လို့ပါ...ငဲငဲ...
ပိတ်သွားတဲ့ ဗွီဒီယိုက ဒီမှာလို့ ထင်ပါတယ်..
She just want to popular.
တစ်ချို့အချက်လေးေ တွ ကောင်းတယ်..ကိုရီးယားက လူတွေ အလုပ်ဘယ်လိုကြိုးစားတယ်...ဘယ်လိုအဆင့်ရှိရှိနေတယ်ဆိုတာကို အတုမခိုးပဲနဲ့ ကောင်လေးတွေကိုရည်းစားစကားစပြောတာ ..ဘယ်လိုဖော်တာ ချွတ်တာကိုပဲ လိုက်အတုခိုးတယ်ဆိုတာ.. အဲဒါကို အစကတည်းက ပြောချင်တာ... ဒူးနေရာဒူးတော်နေရာတော် ဆိုတဲ့စကားလဲမှန်ပါတယ်.. ဘာမဆို လွန်လွန်ကြူးကြူးမဖြစ်တာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ... မင်းသမီးတွေကို jealous ဖြစ်စရာအကြောင်းလဲ မရှိဘူးထင်တာပါပဲ... Jealous ဖြစ်တော့ရော သူတို့မှာ ဘာအကျိုးအမြတ်ရမှာမို့လဲ.. အဝေးကြီးပါ... ကျွန်မလဲ ၂၁ ရာစုမှာလူဖြစ်လာတာပါပဲ ... ခေတ်မှီတာကိုကြိုက်ပါတယ်...အလွန်အကျွံ မဖြစ်စေချင်တာလေးပါပဲ..ဒီအမ နှစ်ယောက်ပြောသွားတာတွေ မှန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်...
မိန်းမကိစ္စ သူတို့မိန်းမချင်းပဲသိလိမ့်မယ်။ဖေါ်ဝတ်တာကောင်းတော့မကောင်းပေမဲ့ ယောင်္ကျားတွေကတော့ကြိုက်လိမ့်မယ်။ကိုယ်လဲနဲနဲကြိုက်သလိုပဲ။
shwe ban said... :
She must beaarmy general's daughter or soldier's wife or rich man's mistress,she say like the SAYAMA GYI.But it isn't respectful video,she has to learn how to understand the young generation in Myanmar.Does she know what the feeling of young people in Myanmar.If u want to criticize,you have to learn how to struggle in young people'life in Myanmar.
နိုင်ငံတကာမှာတော့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကို လူအချင်းချင်း လေးစားခြင်းလို့ အခြေခံအားဖြင့်သတ်မှတ်တယ်...၀တ်စားဆင်ရင်မှုကတော့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ပါ...
အထင်သေးခြင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ..
If U put yourself in their shoes, what would u do?
သင်္ကြန်ကျမှ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရမယ်လို့ ခင်ဗျားကို ဘယ်သူက သင်ပေးထားသလဲ။ ``ကျွန်မလည်း အတိုကြိုက်တယ်။ အရက်သောက်တယ်။`` ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှ သူများဖော်တာ တိုတာ မကောင်းဘူး။ အဆင့် မရှိဘူး ဆိုတာတော့ တော်တော်ပဲ များနေသလားလို့ပါ။ ကြမ်းကြမ်းပြောမှ သိမယ် ဆိုရအောင်ကလည်း ခင်ဗျား ပြောပုံပြောနည်း ပြောတဲ့နေရာက လွဲနေပါသဗျ။ အချင်းချင်း အိပ်ခန်းထဲ ဇီးထုပ်စားရင်း လက်ဖက်သုပ် စားရင်း ပြောရင်တော့ မဆိုဘူးပေါ့။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ယဉ်ကျေးမှု ရှိပါရဲ့လားလို့ အပြင်လူတစ်ယောက်လို နေရာက ခင်ဗျား ပုံ ဟန် အသံ တွေကို ကြည့်ရှုနားဆင်ကြည့်ပါဦး။ ကမ်းခြေမှာ ဖော်တာကျတော့ ခင်ဗျားက အဆင့် ရှိတယ်ဆိုပြီး ထောက်ခံထားသေးတာကိုး။ အဲဒီနေရာတွေက အိမ်သာလိုပဲ မဖော်မဖြစ် ဖော်ရမယ်လို့ လိုင်စင်များ ရထားသလားဗျာ။ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ပြောကြပါဦး။ သင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင် ပြောကြဆိုကြပါ။ ကိုယ့်ကို ကြည့်နေ နားထောင်နေတာက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး မဟုတ်ဘူးနော်။ ကွက်ကွက်ကလေးတင်ပါ။ ကိုယ်ကောင်းအောင်သာ သတိပြုပြီး ကြိုးစားဆင်ခြင် နေထိုင်ပါ။ သူများအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်အပြစ်မပါတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုအကြောင်းကို စာရေးပြီး ပြောရင် မဆိုးဘူး။ ဒါပေမယ့် ရုပ်နဲ့ အသံပါ ပြလိုက်တော့ တော်တော်ပဲ အဆင်မပြေတာတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့။
now she is stayed in singapore.
ရန်နောင်စိုး ပြောသလို ဒီအမျိုးသမီးတွေ ဆုံးမစကားထက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုကြွားချင်ပုံက ပိုများနေတာလက်ခံပါတယ်.. အခုလိုသင်္ကြန်မှာ ဝတ်တာစားတာ ကတာတွေက အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး. အရင်က အင်းလျားလမ်း. ဆရာစံလမ်းတို့မှာ သွားကြည့်ပါ. ကကြပါတယ် ဖော်ကြပါတယ်..ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ တိုင်ပတ်အကလိုမျိုးတွေကနေတာ မူးနေတာ ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ ဆန်းစစ်မကြည့်ကြတော့ဘူးလား.. သူတို့လေးတွေက ကာရာအိုကေတို့ ကလပ်တို့မှ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေများပါတယ်.. ဘဝပေးအခြေအနေက သူတို့ကိုအဲဒီဘဝရောက်နေစေတော့ သူတို့မှာ မွန်းကြပ်ခံစားရတာတွေ အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေက အခုလိုသင်္ကြန်မှာ ထွက်ပေါက်တခုအနေနဲ့ လုပ်နေတာဆိုတာ ကျနော်တို့ယောက်ကျားလေးတွေ နားလည်နိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်.. တခြားအမျုိးကောင်းသမီးတွေ အဲလောက် ရဲတင်းပြီးတိုင်ပတ်အက မကရဲကြပါဘူး .ဆင်ခြင်ပြီးမှ ဆရာမကြီးလုပ်ကြပါ.. ကျနော်အတွေ့အကြုံပြောပါမယ်. စလုံးမှာ ၂၀၀၄-၅လောက်တုန်းက သူငယ်ချင်းနဲ့ sentosa မှာ အပျင်းပြေလျောက်ကြည့်ဘီယာသောက်လုပ်ပါတယ် အဲဒီမှာ ဘီကီနီနဲ့ ရွှေမလေး၎ယောက်က သူတို့လည်း ရေကူးပျော်နေကြပါတယ်. စလုံးကောင်တွေလည်းပါ ပါတယ်. သူတို့ကြည့်ရတာ ဟိုပုတ်ဒီပုတ်နဲ့ အရမ်းရင်းနှီကြပုံပါ. ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ ၂ယောက်ထိုင်တဲ့ခုံရှေ့က ဖြတ်လျောက်သွားပါတယ်. ကျနော်တို့ကို မြန်မာမှန်းသိပုံမရပါဘူး.. ပြောတဲ့စကားက ဟိုရှေ့မှာ မြန်မာကောင်တွေရှိတယ်. မသွားနဲ့တဲ့ သူတို့မြင်ရင် ရှက်လို့တဲ့ .. အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်းက ဇပြင်းပါတယ်.eလိုလည်း အခုမမတွေထက်ပိုကောင်းပါတယ်.. ဒီကောင်eလိုပဲ အော်ပြောပါတယ်. မင်းတို့က အဲဒီလဒတွေကျ ရက်ရောနေပြီးတော့ ကိုယ့်မြန်မာချင်းကျ မြင်မှာတောင်ရှက်တယ်လားဆိုပြီး ဘီယာဘူးကြီးကိုင်ပြီး လိုက်ပြောပါတယ်.. ကောင်မလေးတွေလည်း ထွက်ပြေးသွားပါတယ်.. ပြောချင်တာက နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ မြန်မာမလေးတွေမှာ အဲလိုစိတ်ဓါတ်တွေ အများကြီးရှိတာကို ပြောချင်တာပါ...အားလုံးပဲ နေရာဒေသ အခြေအနေအားလုံးကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ကြပါစေဗျာ..
နောင်စိုး ပြောသလို ဒီအမျိုးသမီးတွေ ဆုံးမစကားထက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုကြွားချင်ပုံက ပိုများနေတာလက်ခံပါတယ်.. အခုလိုသင်္ကြန်မှာ ဝတ်တာစားတာ ကတာတွေက အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး. အရင်က အင်းလျားလမ်း. ဆရာစံလမ်းတို့မှာ သွားကြည့်ပါ. ကကြပါတယ် ဖော်ကြပါတယ်..ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ တိုင်ပတ်အကလိုမျိုးတွေကနေတာ မူးနေတာ ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ ဆန်းစစ်မကြည့်ကြတော့ဘူးလား.. သူတို့လေးတွေက ကာရာအိုကေတို့ ကလပ်တို့မှ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေများပါတယ်.. ဘဝပေးအခြေအနေက သူတို့ကိုအဲဒီဘဝရောက်နေစေတော့ သူတို့မှာ မွန်းကြပ်ခံစားရတာတွေ အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေက အခုလိုသင်္ကြန်မှာ ထွက်ပေါက်တခုအနေနဲ့ လုပ်နေတာဆိုတာ ကျနော်တို့ယောက်ကျားလေးတွေ နားလည်နိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်.. တခြားအမျုိးကောင်းသမီးတွေ အဲလောက် ရဲတင်းပြီးတိုင်ပတ်အက မကရဲကြပါဘူး .ဆင်ခြင်ပြီးမှ ဆရာမကြီးလုပ်ကြပါ.. ကျနော်အတွေ့အကြုံပြောပါမယ်. စလုံးမှာ ၂၀၀၄-၅လောက်တုန်းက သူငယ်ချင်းနဲ့ sentosa မှာ အပျင်းပြေလျောက်ကြည့်ဘီယာသောက်လုပ်ပါတယ် အဲဒီမှာ ဘီကီနီနဲ့ ရွှေမလေး၎ယောက်က သူတို့လည်း ရေကူးပျော်နေကြပါတယ်. စလုံးကောင်တွေလည်းပါ ပါတယ်. သူတို့ကြည့်ရတာ ဟိုပုတ်ဒီပုတ်နဲ့ အရမ်းရင်းနှီကြပုံပါ. ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ ၂ယောက်ထိုင်တဲ့ခုံရှေ့က ဖြတ်လျောက်သွားပါတယ်. ကျနော်တို့ကို မြန်မာမှန်းသိပုံမရပါဘူး.. ပြောတဲ့စကားက ဟိုရှေ့မှာ မြန်မာကောင်တွေရှိတယ်. မသွားနဲ့တဲ့ သူတို့မြင်ရင် ရှက်လို့တဲ့ .. အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်းက ဇပြင်းပါတယ်.eလိုလည်း အခုမမတွေထက်ပိုကောင်းပါတယ်.. ဒီကောင်eလိုပဲ အော်ပြောပါတယ်. မင်းတို့က အဲဒီလဒတွေကျ ရက်ရောနေပြီးတော့ ကိုယ့်မြန်မာချင်းကျ မြင်မှာတောင်ရှက်တယ်လားဆိုပြီး ဘီယာဘူးကြီးကိုင်ပြီး လိုက်ပြောပါတယ်.. ကောင်မလေးတွေလည်း ထွက်ပြေးသွားပါတယ်.. ပြောချင်တာက နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ မြန်မာမလေးတွေမှာ အဲလိုစိတ်ဓါတ်တွေ အများကြီးရှိတာကို ပြောချင်တာပါ...အားလုံးပဲ နေရာဒေသ အခြေအနေအားလုံးကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ကြပါစေဗျာ..
စလုံးက အမပြောတာကို တစ်ယောက်ယောက်က သူ့ဝတ်ပုံစားပုံနဲ့ video ပြန်လုပ်ပြီးတင်လိုက်လို့ အခုဒီအမက စိတ်ဆိုးလို့ ဒေါသသောသောနဲ့ ပြောတယ်လို့ နားလည်ပါတယ်။ တစ်ချို့သောသူများက ကိုယ်ကိုတိုင်တော့ ဖြစ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ပဲ သူများလုပ်တာကို အပြစ်ပြောချင်ကြတယ်။ အဲ့ဒီ stupid လို့ ဝေဖန်သွားတဲ့တစ်ယောက်ဟာ သင်္ကြန်တွင်းမှာ သူလည်းအဲ့အတန်းထဲမှာ ပါခဲ့ပုံရတယ်။ ပြီးတော့ သူများ မြန်မာ အဝတ်အစားမဝတ်တာဟာ.... ရောမရောက်ရင် ရောမလိုကျင့်ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ကြားဖူးရင် အဲ့ဒါကို ပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။ မြန်မာမှာ နေရင် မြန်မာလိုကျင့်မှာပဲ။ နိုင်ငံခြားမှာရောက်ရင် နိုင်ငံခြားလိုကျင့်မှာပဲ။ အခုပြောနေတာက မြန်မာနိုင်ငံသင်္ကြန်( နိုင်ငံခြားမဟုတ်ပါ)တွင်းက ရေကူးဘော်လီနဲ့ ရေပက်ခံထွက်တဲ့သူတွေကို ပြောနေတာပါ။ ဘောင်းဘီရှည်၊ စကတ်တို ဝတ်နေသူများကို မဆိုလိုပါ။ အခုဒီအမပြောသွားတာက တိုင်ပတ်ကနေတဲ့မိန်းမတွေ၊ ရေကူးဘော်လီ နဲ့ ရင်ပတ်အရှေ့ခြမ်းအကုန်ဖော်ထားသော မိန်းမများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လွန်လွန်းပြီး တစ်ဘက်ကမ်းကို ကျော်နေသူများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ If you don't understand her words just try to listen it again properly Ko or Ma Anonymous.
It doesn't matter how much u can speak English well or not and where u live, but the way u r talking is undipolmatic. It shows your status.
သူ့ခမျာ...သူများကို ဆရာကြီးဝင်လုပ်မိတာနဲ့.. ဟိုလူက၀ိုင်းဆော်.. ဒီလူက၀ိုင်းတီးနဲ့
တစ်နေ့ တစ်နေ့.. ငါ့ကိုဘယ်လိုတွေများ ကွန်မန့်ထပ်ပေးနေကြပြန်ပြီလဲမသိဘူး.. ဆိုပြီး စိုးရိမ်တကြီးနဲ့..you tube ဖွင့်ကြည့်လိုက်.. မကြိုက်တဲ့. ကွန်မန့်တွေဖျက်လိုက်နဲ့.. နောက်ဆိုထပ်ပြီး ဆရာကြီးမလုပ်ရဲလောက်တော့ဘူးနဲ့ တူပါတယ်.. ပြောလို့မရဘူးလေ.. နဂိုကတည်းက နာမည်ကြီးချင်စိတ်.. စတားဖြစ်ချင်စိတ်... ဆရာကြီးလုပ်ချင်စိတ်.. ဓါတ်ခံပါလာတော့လည်း.. တားမရဘူးပေါ့... ငါပြောသလိုလုပ်.. ငါလုပ်သလိုတော့လိုက်မလုပ်နဲ့ ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ.. သနားပါတယ်.. သူ့ခမျာ.. ပရက်ရှာ တော်တော်မိနေတယ်...
အထိုင်မတတ် ဖြဲသလို(ကန်တော့ ကန်တော့ )
မထိုင်ပဲ ထနေတာ ပိုကောင်းတယ် ။
(အခုလဲထရုံတင်မကဘူး ကြွတောင်နတယ် )။
ဒီကဟာမတွေ ကြွနေတာကြိုက်ပုံမရဘူး ။
ဂျေဝင်နေသလို သွိုင်းရွိုက်ရောဂါလည်း ၀င်နေပုံရတယ် ။ဆေးကုသမှူခံယူပြီး ပြန်ြေ့ပာပြီးပြန်တင်ကြည့်ဘာလား ။ စေတနာမှန်ပေမဲ့ နည်းလမ်းလွဲနေတယ် ။ဗိုက်ကခွဲရမဲ့ အလုံးကို နောက်ကျောကခွဲ ၊သွားကိုပါးစပ်ကမနှုတ်ဘဲစအိုကနေလှမ်းနှုတ် နေသလို ဖြစ်နေတယ် ။
I found myself feeling so peeved browsing through the comments and what people had to say regarding this video. I understand how she feels and would like to share my experiences as well. I’m no literacy genius but I feel obliged to rebut blatant attacks to this video.
First of all, there are different perceptions to this issue. Sure, some people think it’s perfectly fine to dress slutty in broad daylight, pole dancing in public and everything should be excused because it’s Thingyan. Saying stuff like Missburmese should just mind her own business and what people wear shouldn’t be any concern of hers. But it is….because as Myanmar is now at its most exciting stage of working towards beingademocratic society, it is receiving attention from all regions of the world like never before. Seriously speaking, it reflects badly on us. The worst part is that the celebrities are the ones dressing up like that and it actually encourages youngsters to follow because after all, there is no age restriction and anyone can see the suggestive actions and provocative clothing that these celebrities wear during thingyan. It will make youngsters think that this is perfectly all right to dress likeahooker and prancing down the streets.
Bear in mind she has nothing against people dressing up fashionably but we’re talking about clothes that make you look likeahooker. This is the difference which people cannot understand. Dressing with class. I know I stopped celebrating thingyan in the streets because it felt likeajoke. Not trying to be insensitive but it made feel me very uncomfortable. Most girls were dressed so scantily and it made me wonder if Thingyan was all about being able to dress slutty and get drunk.Celebrities haveagreat influence on young burmese people. Think about hundreds of girls or boys who want to be models/singers/actors because frankly speaking, there are no other role models they can look up to. Can you imagine if your own daughter/ sister/ girlfriend dress up like that during Thingyan? I’m pretty sure you won’t allow it.
I personally feel that Miss Burmese has doneagreat job in spreading the cultural and language toadiversity of people (See her other videos). It’s also perfectly fine to voice out your opinions online and gives constructive comments inacivilized manner. But judging from the negative comments, I don’t know how we can improve asasociety if our own community cannot discuss and exchange ideas or views.
love learner said... :
ဆရာမကြီးရဲ့ နောက်ထပ် ဗီဒီယိုတစ်ခု.....
ဆရာမကြီးဆီမှာ လက်တွေ့ သင်တန်းတက်ချင်တယ်...
henridaite said... :
U can't say that guy!! အဲလိုပြော် ကြီးဆို ထိုင်း|စင်ကာပူ| မလေးရှား| အခြား ဥရောပ နိုင်ငံတွေအာလုးံ ပြည်တန်ဆန် တွေလာ?
ပြောလိုက်စမ်း၊ သူများမကောင်းကြောင်း ကိုယ့်ကောင်းကြောင်းလေး...
she is not insulting anyone..she only mentions about myanmar culture generally.. this is her pure opinion..why you write this post in here...please post asagentleman not asachild.
I like her talks.
မြန်မာပြည်မှာ မွေးပြီး မြန်မာပြည်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ လူတယောက်အနေနဲ့ သင်္ကြန်မှာ ဒီလိုမျိုးဝတ်စားတာတွေ..တိုင်ပတ်အကလိုမျိုး လူကြားထဲမှာကနေတာတွေ လူရှေ့သူရှေ့ ကစ်ပေးနေတာတွေ ဘီယာပုလင်းးတွေကို ကိုင်ပြီး သောက်ပြနေတာတွေကို မြင်ရတဲ့အတွက် အလွန့်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ သူများတွေက ပြောကြတယ် ဒိမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တော့မှာမို့ ပွင့်လင်းစပြုနေပြီမို့ မိန်းကလေးတွေက ဒီလိုဝတ်ကြတာတဲ့..နိုင်ငံတကာ ရင်ဘောင်တနုးနိုင်အောင်လို့တဲ့..တကယ်တော့ အ၀တ်အစားကို သူများနိုင်ငံတွေလို အတုယူပြီး လိုက်ဝတ်ယုံနဲ့ နိုင်ငံတကာ ရင်ောင်တန်ုးနိုင်တယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ နေရာဒေသလိုက်ပြီး ၀တ်ကြပါတယ်။ တကယ့်ပွဲကြီးလန်းကြီးဆိုရင် သူတို့ အဆင့်တန်းရှိရှိဝတ်ကြပါတယ်။ ပါတီသွားမယ်ဆိုရင်လည်း ပါတီသွားမယ့်စတိုလ်အ၀တ်အစားကို ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်။ လမ်းမှာမိန်းကလေးတွေ ဘီယာမူးကြပြီး ဟိုဖော်ဒီဖော်လုပ်ရင် ဖမ်းခံရပါတယ်။ ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်တွေအကုန်လုံး ဘီယာသောက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ သောက်ရင် ဖမ်းခံရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကလပ်တွေလည်း သွားလို့မရပါဘူး ဒီမိုကရေစီရနေတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေဟာ သူ့ဟာနဲ့သူ စည်းကမ်းတွေဟာ ရှိပြီးသားပါ။ လူတွေကလည်း လိုက်နာကြလို့ တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတာပါ။ ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေ ပျက်စီးနေတယ် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေလို့ လူအများစုကပြောနေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ နိုင်ငံခြားနေရာက်နေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ အလွန်သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အမိမြေနဲ့မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာပြီး သူတပါးတိုင်းပြည်မှာသွားနေရတာပါ။ ပညာရေးအားနည်းမှု့၊ အသိပညာအားနည်းမှု့၊ဘာသာစကား အားနည်းမှု့ကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာ မြန်မာတွေ မျက်နှာငယ်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်ရင်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေက ကျောင်းနဲ့ အလုပ် ပတ်လည်ရိုက်ပြီး ကဲဖို့ ပျက်စီးဖို့ဆိုတော့ တော်တ်ာကိုရှားပါတယ်။ မနက်ဆိုရင် ကျောင်းသွား၊ နေ့လည်ဆိုရင် အလုပ်သွား၊ ညနေ အိမ်ပြန်ရောက် ဟင်းချက်၊ စာကြည့်နဲ့ ၂၄ နာရီဆိုတော့ အချိန်ဟာ မလုံလောက်သလိုပါပဲ။ တကယ်တမ်းစစ်မှန်တိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ နိုင်ငံကို လိုချင်ရင် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ကို အရင်ပြင်ရမှာပါ။ သူတပါး မကောင်းမြင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ မနာလိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ပျင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်၊ ဗဟုသုတလိုက်စားချင်စိတ်မရှိတဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ အချိန်ဖြုန်းချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ၊ မိုခိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါ။ စိတ်ဓာတ်တွေပြင်ပြီး သွားရင်တော့ စာပေတွေလိုက်စားပါ၊ ဗဟုသုတတွေကို ရှာဖွေပါ။ နိုင်ငံတကာရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင် အ၀တ်အစားထက် ရုပ်ရည်အလှအပထက် အရေးကြီးတာအများကြီးရှိတာသိလာပါလိမ့်မယ်။ လမ်းကြောင်းမှားနေရင်လည်း လမ်းမှန်ကိုရောက်နိုင်မှာပါ။ နောင်တခေတ်တိုင်းပြည်အတွက် တန်းဖိုးရှိလှတဲ့ သားကောင်းရတနာတွေဖြစ်နိုင်ပါ။
အများက ဆိုဆုံးမနေတာကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံစေချင­်တယ်။
အမိယုတ်တော့ နုတ်ကြမ်းတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အမှုအကျင့်ကြောင့် မိဘပါ သိက္ခာ မကျစေချင်ဘူး ညီမလေးရယ်။
ညီမလေး ကလပ်သွား အရက်သောက် စကပ်တိုတွေဝတ်ပြီး အဆင့်ရှိရှိ﻿ ပျက်စီးနေမှာကို ညီမလေးရဲ့ ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး ငယ်သေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေက သင်္ကြန်မှာ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ပြီး တနေ့ ငါနိုင်ငံခြားထွက်မှ အဆင့်ရှိရှိဖော်ပြပစ်မယ် ပျက်စီကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးလေးများဝင်သွားမလားဆိုတာရေ­ာ မတွေးမိလေးသလားညီမလေး
နားကြားပြင်းကတ်တယ်။ သူများကို ပြောချင်ရင် ကိုယ့်ဟာကို ကောင်းအောင် အရင် ကြိုးစားပါဦး။ နိုင်ငံခြားမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ထဲမှာ စကတ် အတိုဝတ် ပြီး ဘီယာမသောက်တတ်တဲံ သူတွေ အများကြီးပါ။ နိုင်ငံခြားသူတွေထဲမှာလည်း လုံလုံခြုံခြုံ ၀တ်တဲ့သူတွေ အမျာကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ နေတဲ့သူတိုင်း သူ့လို မဖော်ကြ ဘီယာမသောက်ကြပါဘူး။ နောက်ပြီး ဖော်တာပဲ အဆင့်အတန်းရှိသည်ဖြစ်စေ. မရှိသည်ဖြစ်စေ။ ဖော်တာက ဖော်တာပါပဲ။ ဘယ့်နှယ့်. ကိုယ်ဖော်တာကြတော့ အဆင့်အတန်းရှိပြီး သူများကိုတော့ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် ကဲ့ရဲ့တာတော့ မကောင်းဘူး ထင်ပါတယ်။
san said... :
အမ ရဲ့ oတ်စား ဆင်ရင်မှု ကိုဝေဖန်ထားတဲ့ POST လေးကို ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ confidence ရှိတယ်။ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်း အရာကို သက်ဝင် ယုံကြည် မှုရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြုသဘောနှင့် ဝေဖန် ရရင် ပွင့်လင်း တာနှင့် ရိုင်းတာမတူပါဘူး။စကားလုံးရွေးချယ်မှု ကတော်တော်ကြီးကိုပြင်းထန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင် ဒါက လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင် ၊လွတ်လပ်စွာဝတ်စား ဆင်ယင်ပိုင့်ခွင့် လို့ လူပြောများလာတဲ့ democracy basic right,ကိုရ ယူတဲ့နေရာမှာ နားလည်မှုအလွဲ တွေလို့မြင်ပါတယ်။ ခေတ်မီစွာ ၀တ် တာကို တော့လက်ခံပါတယ် ဒါပေမယ့် ခေတ်လွန်တာတော့ လက်မခံပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ အပြုသဘောနှင့်ဝေဖန်မှုကိုတော့လက် ခံပါတယ်။ဒါပေမယ့် အစွန်းရောက်စွာ ပြောရင်တော့ ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားကသူများလက်ခံဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်ကို လွတ်လပ်စွာဖော်ပြတာပါ ....
Yeti said... :
အဲဒီလိုတွေ ခဏခဏကြားနေရသလိုပါပဲ။ တုံးပိနေကြသလိုပါပဲ။ မူရင်း YouTubeမှာ ရေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အမျိုးသမီးများကို (ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်သူများအပါအ၀င်) ရှင်းရှင်းလေးမေးချင်ပါတယ်။ " သင့်ကိုရော ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတာ လိုချင်ပါလဲ၊ ဘယ်လိုလူမျိုးကတန်ဖိုးထားတာ လိုချင်ပါသလဲ။ "
ဒီလိုပြောချင်ရင် ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတွေ စသည် စသည် လက်ချာတွေ တွဲပေးသင့်ပါတယ်။
ခင်ဗျားပြောတာ မှန်ပါတယ်လို့ ထောက်ခံပေးရုံနဲ့ မနစ်နာသွားပါဘူး။ မနစ်နာသွားဘူးဆိုတော့ မြတ်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်နော်။ဒါဆို ခင်ဗျားမှန်သွားပြီလား။
" တကယ်ကိုပဲ ခင်ဗျားကို စံပြနဲ့ ဦးဆောင်စေချင်တာပါ။ "